Inzondo ye-UNWTO ye-WTTC ibandakanya neTweeted Love Photo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zikaRhulumente » Inzondo ye-UNWTO ye-WTTC ibandakanya neTweeted Love Photo
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • iintlanganiso • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Iindaba zaseSaudi Arabia zokuPhula • ISpain Iindaba Eziphambili • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba eziHlumayo zase-UK
UJulia Simpson, umphathi omtsha we-WTTC, kunye noZurab Pololikashvili, uNobhala-Jikelele we-UNWTO, babonwabile isidlo sangokuhlwa kunye eLondon.
Le yayiyinguqulelo ekujongwe ukuba ifoto ithunyelwe nje ngumcebisi we-UNWTO u-Anita Mendiratta.
Ngelishwa eli ayilo bali lipheleleyo.
Ukubanjwa emlilweni ngu-Maribel Rodriguez, i-VP ye-World Travel and Tourism Council.
Nge-Saudi Arabia iphakamisa ukubakho kwemali-mboleko yokufumana ukhenketho kwihlabathi liphela, umgaqo-nkqubo omiselweyo wokungahoyi icandelo labucala kunye nokungabikho kolungelelwaniso lwe-COVID-19 kwangexesha yi-UNWTO ayisasebenzi.
Ukugqabhuka kokwaliwa kwi-WTTC ngo-1977 owazalwa ngu-Nobhala-Jikelele we-UNWTO uZurab Pololikashvili eRitz Carlton Ihotele iRiyadh ikwimfuno engxamisekileyo yokulungiswa.
Umcebisi ophambili kunye nomcebisi kubabhali be-UNWTO, u-Anita Mendiratta, weza kumhlangula ngefoto engonwabanga ayithabathe kwindawo yokutyela yaseLondon.
Ezokhenketho zisengxakini, kwaye bonke abachaphazelekayo kunye noRhulumente basebenza kunye kuphela kwendlela eya phambili. I-UNWTO yayiyeyona ntle ngaphandle.
Olu luvo kuye kwafuneka lutshintshe ne-Saudi Arabia ikulungele ukuvela njengenkokeli kule meko kwaye ibeka imali ngasemva kwayo, iibhiliyoni zeedola ezabelwe isandla esinye ukunceda uqoqosho lwezokhenketho lwehlabathi.
Njengakwibali lempimpi, i-UNWTO uZurab Pololikashvilli, ekhokelwa ngumcebisi wakhe ophambili, u-Anita Mendiratta, wenza isenzo. I-Zurab yayihlala ilungile ukukhokela ngokusekwe kumbono. Ngokusebenzisa igama elilungileyo le-WTTC ye-WTTC yexesha elizayo, umatshini we propaganda kaZurab uvuliwe, wabanjwa.
Khumbula? Oku kwakungoMeyi 2017
UNobhala-Jikelele we-UNWTO, u-Taleb Rifai, uvakalise umbulelo ongazenzisiyo kwi-World Travel & Tourism Council (WTTC) ngentsebenziswano eqinileyo phakathi kwale mibutho.
Kule minyaka mithandathu idlulileyo, i-UNWTO kunye ne-WTTC benze ubudlelwane obuluqilima, bezisa icandelo likarhulumente kunye nelabucala ngokudibeneyo ukuqhubela phambili ukhenketho kunye nokujongana neyona nto iphambili.
Kwi-UNWTO kunye ne-WTTC Open Letter kwiNkqubo yoKhenketho noKhenketho eyaqaliswa ngo-2011, inkxaso yafunyanwa kwiiNtloko zoMbuso nezikaRhulumente ezingaphezu kwama-80 kwihlabathi liphela. Ngale nyathelo, i-UNWTO kunye ne-WTTC zijolise ekukhuthazeni ukubaluleka kwecandelo lezokhenketho kuphuhliso olubandakanya intlalo noqoqosho kwinqanaba eliphezulu.
Le ntsebenziswano phakathi kwe-UNWTO kunye ne-WTTC yahlala yomelele kwade kwaba ngu-Disemba 31, 2017. Ukuqonda ukubaluleka kobambiswano lukarhulumente nolwangasese kweli candelo, kubalulekile ukuba uNobhala-Jikelele ophumayo, uTaleb Rifai, ameme i-CEO ye-WTTC esandula kunyulwa, uGloria UGuevara, ukuya kwindibano ye-UNWTO eChengdu, China, ngo-2017.
I-CEO ye-WTTC ngo-2017, uGloria Guevara, wayenguMphathiswa wezoKhenketho eMexico ngo-2011. IMexico yaba lilizwe lokuqala ngoFebruwari ka-2011 noMongameli waseMexico uCalderon etyikitye iphulo lokhenketho le-UNWTO / WTTC elimiselwe iintloko zamazwe angama-80 kwihlabathi liphela.
Umphathiswa Wezokhenketho waseMexico, uGloria Guevara, ovela kumzi mveliso wabucala, ukuqonde ngokucacileyo ukubaluleka kwamacandelo (abucala nawoluntu) ukuba basebenze kunye.
Kwakungaziwa ngo-2017 ukuba uNobhala-Jikelele we-UNWTO osanda kunyulwa, uZurab Pololikashvili, wayenezicwangciso ezahlukeneyo, kwaye ababandakanyi iWTTC.
Utshintshe njani i-UNWTO ubusuku bonke nge-1 kaJanuwari 2018
Ngomhla kaJanuwari 1, 2018 uZurab Pololikashvili uthathe inxaxheba kwi-UNWTO.
Kwiminyaka emithathu kamva iingcali ziyavuma, bekungafanelanga ukuba angaze akwazi ukwenza oku.
Ukunyanzelwa kwe-UNWTO ukukhusela unyulo lukaNobhala Jikelele uZurab Pololikashvili kuyaqhubeka.
Unobhala Jikelele we-UNWTO ongenayo owayesebenzela i-UNWTO wayekhonza njengeNxusa laseMadrid kwilizwe lakhe, kwiRiphabhlikhi yaseGeorgia, wayengenamava kwicandelo labucala nakwezokhenketho.
NgeZurab ithatha i-helm ye-UNWTO, IATA, ICAO, kunye ne-WTTC baphulukana nokuma kwabo.
Kwi-2018 UINtlanganiso kaWonkewonke ye-NWTO eSt. Petersburg, eRashiya, I-Zurab isuse uninzi lwezicwangciso ze I-WTTC yokuzibandakanya kwi-ajenda esemthethweni kwaye wenza umphathi we-WTTC ukuba ahlale ngasemva kwigumbi.
UZurab akaphumelelanga ekubongozeni umboniso wokuhamba waseSpain, FITUR, ukungamemi i-WTTC ngo-2019.
UZurab wayefuna ukuba iNgqungquthela yeWTTC yeHlabathi ngoMeyi 2021 eCancun isilele kwaye watyhala uRhulumente weRiphabhlikhi yaseDominican ukuba acwangcise umsitho we-UNWTO wengingqi ukungqubana nemihla yeNgqungquthela yeWTTC.
Ngokumangalisayo, umphathi we-WTTC uGloria Guevara umeme uZurab ukuba azimase kwaye athethe kule ngqungquthela, kodwa, ewe, oku akwenzekanga. Amalungu e-WTTC ayenomsindo, kwaye tUmphathiswa Wezokhenketho kwiRiphabhlikhi yaseDominican waxolisa kwaye wawurhoxisa umcimbi we-UNWTO.
KwakungoMeyi 27, 2021, eRiyadh, eSaudi Arabia
Kumsitho woo opening yeziko lommandla we-UNWTO eRiyadh, Saudi Arabia, UNobhala-Jikelele we-UNWTO uZurab Pololikashvili ujoyine i-Her Royal Highness Princess Haifa Al-Saud, uSekela-Mphathiswa Wezokhenketho kwiQhinga noTyalo-mali, kunye noMphathiswa Wezokhenketho kuBukumkani, uMhlekazi Ahmed Al Khateeb vula ngokusemthethweni iofisi.
Baye bazimanya nabaPhathiswa bezoKhenketho abaphuma kuMbindi Mpuma nakuyo yonke imimandla yehlabathi, kunye neenkokheli ezivela kwicandelo labucala.
Umhlonishwa. UMphathiswa uEdmund Bartlett waseJamaica kunye noMhlonishwa. UMphathiswa uNajib Balala bebezimase umsitho, ngethuba uZurab Pololikasvili ebangela umbono obonwe kwigumbi lokungenisa ihotele ye-5-yeenkwenkwezi iRitz Carlton Ihotele eRiyadh.
Kutheni le nto uZurab ekrwada kangaka kuMaribel Rodriguez?
UZurab wanyanzelisa ukuba angamemi i-WTTC ukuba iye kuvulwa kweZiko leNgingqi le-UNWTO eRiyadh, eSaudi Arabia ngoMeyi 26, 2021
Ngenxa yoko uSekela Mongameli we-WTTC, uMaribel Rodriguez, wacelwa ngumququzeleli ukuba angayi kulo msitho. Ngesinye isikhathi, uZurab wayesongela ukushiya umcimbi kunye nabantu bakhe abangama-80 ukuba uMaribel Rodriguez ovela kwi-WTTC wayevumelekile.
UMaribel Rodriguez wayemele ngokusesikweni uGloria Guevara, u-CEO we I-World Travel and Tourism Council (WTTC). Wabaleka ngenqwelomoya esuka kowabo eMadrid, eSpain.
Ukumela awona malungu amakhulu abucala kwihlabathi, WTTC Inendima ebalulekileyo ekuboniseni ukuba icandelo labucala kunye nelikarhulumente kushishino lokuhamba luxhunyiwe.
Ukungabikho kobunkokheli yi-UNWTO, i-WTTC ikwazile ukuzisa iinkokheli ezininzi kwicandelo likarhulumente ukuba ziye kwimibutho yeentlanganiso veki nganye kubhubhane we-COVID.
UMaribel Rodriguez wajoyina i-WTTC ngo-2014. Uye wakha uthungelwano olubanzi kwicandelo lezokuHamba nezoKhenketho kwicandelo likarhulumente nelabucala, eliqokelela ngaphezulu kweminyaka engama-20 yokuthengisa, ukuthengisa, ukunxibelelana, kunye namava ezorhwebo eYurophu naseLatin America kushishino lweenqwelo moya kunye nolwamkelo.
WayenguMlawuli oLawulayo wezoRhwebo kunye neLungu leBhodi yeeTravelodge Hotels eSpain ukusuka ngo-2008 ukuya ku-2014.
Ngaphambi koko, uchithe iminyaka eli-11 kushishino lokuhamba ngenqwelomoya, efumana amava abanzi kuyo yonke imiba yezorhwebo ngenqwelomoya, elawula phakathi kwezinye ukwenziwa kweenqwelo moya ezinamaxabiso aphantsi kwimakethi esemaZantsi eYurophu yeVirgin Express, Go-Fly, EasyJet, kunye Ryanair. Wayesebenzela iBritish Airways yaseSpain, ePortugal naseFrance. UMaribel une-Executive Executive kwi-ICADE Business School, isiDanga kwi-Industrial Psychology evela kwiDyunivesithi yaseSalamanca, kwaye ubambe iNkqubo yesiGqeba esiPhezulu soKhenketho noKhenketho e-IESE & JSF. Uthetha isiNgesi ngokutyibilikayo, isiPhuthukezi, kunye nenqanaba elifanelekileyo lesiFrentshi nesiDatshi.
UMaribel ngummi wokuqala waseSpain onolu hlobo lwesikhundla solawulo kwiBhunga leHlabathi lezoKhenketho noKhenketho.
UMaribel wayengafuni ukongeza kwisiphithiphithi esasiqhubeka eRitz Carlton Ihotele eRiyadh. Wayengafuni ukuba yinxalenye yomdlalo wokukhwaza, kwaye akazange afune ukuhlazisa umphathi-wase-Saudi Arabia.
Emva kokuba exelelwe ukuba akasamkelwa, wonwabele izibonelelo ezibalaseleyo ze URitz Carlton Riyadh ihotele endaweni yoko. Uye wahambisa intetho yakhe emfutshane ebisoloko icwangciselwe usuku olulandelayo.
Kutheni le nto ubabalo luka-Anita Mendiratta lwe-tweet izolo lubalulekile?
Ewe, iintetho zemali -kwakhona kwi-UNWTO- kunye nemali yokhenketho ivela eSaudi Arabia kwezi ntsuku.
Nge-CEO ye-WTTC yangaphambili uGloria Guevara ngoku esebenzela uRhulumente wase-Saudi Arabia, uZurab kuye kwafuneka alungise imeko awayeyibangele eRiyadh.
Umcebisi ophezulu kunye nomhlobo osondeleyo okhethekileyo kuNobhala we-UNWTO uZurab UPololikashvili ngumcebisi wase Mzantsi Afrika (ngoku ozinze eLondon) uAnita Mendiratta. U-Anita wayekwangumcebisi ophezulu ku-Gqirha Taleb Rifai, owayengu-Nobhala-Jikelele we-UNWTO.
Ngeli xesha uGqirha Taleb Rifai waye weviwa ethetha ngokuchaseneyo Zurab Pololikashvili esidlangalaleni.
UAnita wayengumntu owayeququzelele intlanganiso ethe cwaka phakathi kukaZurab Pololikashvili noJulia Simpson kwiinyanga ezininzi ezidlulileyo ngaphambi kokuba uJulia aqale isabelo sakhe eWTTC.
Le ntlanganiso yenzeka kwindawo yokutyela eseLondon ngoMeyi kungekudala emva kokuba i-WTTC ibhengeze ukuqeshwa kweLungu leKomiti eLawulayo ye-International Airlines Group (IAG), UJulia Simpson, njengo-Mongameli kunye ne-CEO yayo, ukuqala nge-15 ka-Agasti.
UJulia wayengekasebenzi kwi-WTTC, kodwa wayesebenzela i-IAG, xa wadibana noZurab. Kananjalo khange aziswe malunga nomsebenzi wakhe omtsha njenge-CEO ye-World Travel and Tourism Council.
Ewe, uJulia wayengazi ukuba kukho ukungavisisani phakathi kwe-UNWTO kunye ne-WTTC kwaye ifoto igcinwe itshixiwe ngu-Anita Mendiratta phantse iinyanga ezi-4 ngaphambi kokuba bobabini uZurab no-Anita babhale i-tweet - ngesizathu esahluke kakhulu.
UNWTO umzamo wobuxoki wokulungisa ubudlelwane ne-WTTC
Ukungahoyi iminyaka yonxibelelwano olusebenzayo kunye nemisebenzi ebibekwe phantsi kolawulo lwangaphambili lwe-UNWTO, kunye nokulahlekisa uluntu ngokuthumela le-tweet ngesithombe esidala, kwakhona ngumzekelo weklasikhi wendlela uNobhala Jikelele okopela ngayo indlela eya phambili. Oku kunokuba kutsha kwifilimu kaJames Bond.
Lo mbhali uphendule kwi-tweet eposwe ngu-Anita Mendiratta esithi:
Ngentlonipho yonke uAnita, le yiposti engabizi kakhulu.
Emva kwendawo uZurab ayibangele eSaudi Arabia, kucacile ukuba uyayicaphukela i-WTTC kwaye uziva esongelwa ngabo ngokwenza into ebalulekileyo kubandakanya icandelo likarhulumente. Ndiza kuthetha ngaphezulu?